भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने कि भ्रष्टको पछि लाग्ने ?
सरकारको जिम्मेदारीको पदमा पुग्नेहरूलाई भ्रष्ट बन्न बाध्य हुने वातावरण बनाउने, भ्रष्टाचार नगरी कुनै काम पनि डेग नचल्ने, त्यस्ता वातावरण सुधार्न र भ्रष्ट कृयाकलाप रोक्न कुनै पहल नगर्ने, नजराना वा घूस नदिदासम्म शासन÷प्रशासनको ईन्जिनमा अनावश्यक घर्षण तथा ब्रेकडाउन हुने, कुनै काम गर्ने अधिकारीलाई एकल अधिकार नदिने, अधिकार विकेन्द्रीकरण र सामूहिक निर्णयका नाममा नानाभाँति निकायहरूका, बिना कामका असम्बन्धित, कार्यसम्पादनको जिम्मेवारीबहन गर्न नपर्ने, गैरजिम्मेदार, अनुत्तरदायी प्रतिनिधिहरू समावेश गरेर समितिहरू बनाउने, हाकिमले कार्यालयको निर्णय लिन पनि अन्य दश ठाउँको परामर्श वा पूर्व सहमति लिनुपर्ने प्रशासन ब्यवस्था स्थापित गरेर, फाईदा नलिई कुनै लोभ वा प्रलोभन नदेखाई, कुनै काममा पनि कसैबाट काम गर्न सहमति नपाईने, तर काम नभएकोमा अमुक कुनै एक अधिकारीलाई मात्र धारेहात लगाउने, तथानाम गालि गर्ने, त्यो भ्रष्ट हो भन्ने अबुझ तथा गैरजिम्मेवार नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारको समस्या समाधानमा सिन्को पनि भाँचिदैन ।
यो कटुसत्य बुझेर कुनै ठोस आमूल परिवर्तनको पहल नहुँदासम्म एकले अर्कालाई तँ भ्रष्ट भन्दैमा नेपालीको यो जुग कट्ने छ ।
जुन समाजमा शासन/प्रशासनको मशिनमा घूस नै लुब्रिक्यान्ट बनिसेकेको हुन्छ, त्यहाँ बिनालुब्रिक्यान्ट मेशिन चलाउछु भन्ने दुस्साहस गर्न ईन्द्रको बाउ चन्द्र आए पनि लछारपाटो लगाउन सक्ने छैन ।
भ्रष्टाचारको गंभीर समस्या नै बुझ्न नचाहने नेपाली समाजमा यसको समाधान हुने आश कसरी गर्न सकिएला र ? तँ भ्रष्ट, उ महाभ्रष्ट, उ झन् भ्रष्ट, को भन्दा को बढी भ्रष्ट, सबै भ्रष्ट भनेरै दिन कटाउनुको बिकल्प के होला र ?